यी पाँच बानीका कारण समय अगावै लाग्छ बुढेसकाल, हुनुहोस् सावधान | Safal Khabar
विहीबार, २९ माघ २०७७, ११ : १०
काठमाडौं । हाम्रो जीवनशैलीको हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर पार्ने गर्छ । हामीले दैनिक अपनाउने केही बानी यस्ता हुन्छन् जसका कारण बुढेसकालको लक्षण समय अगावै देख्न थाल्छ । हामी आज तपाईंलाई यस्ता बानीबारे जानकारी दिँदै छौं जसले हामीलाई समय अगावै बुढो बनाउन सक्छ, यस्ता बानीलाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
चिसाेमा बाथ राेगका बिरामीले के कुरामा ध्यान दिने ?
जाडो मौसमका लागि उपयोगी खानेकुरा के के हुन ?
जाडो महिनामा किन बढी प्रयोग हुन्छ जाइफल ?